घोडाघोडीमा अर्को व्यथितिः सिँचाई बोरिङको बजेट अध्यक्षको घरमा, उपमेयरको लाजमर्दो तर्क — onlinedabali.com
घोडाघोडीमा अर्को व्यथितिः सिँचाई बोरिङको बजेट अध्यक्षको घरमा, उपमेयरको लाजमर्दो तर्क
धनगढी । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिमा सिँचाई बोरिङ निमार्णका लागि नगरपालिकाले १० लाख बजेट विनियोजन गर्यो । बेल्कोट सुन्दरटोल बोरिङ योजनाको काम सुरु गर्नेभन्दै उपभोक्ता समितिले ३ लाख पेश्की पनि लियो तर त्यो अध्यक्षको घरमा । समयमै काम नभएपछि बजेट फ्रिज भयो ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले योजना नै विर्षिए तर जनता बोरिङ बन्ने आशमा बसे । उक्त रकमबाट एकवर्षमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको घर बन्यो, जनताको खेत सिँचाई गर्ने सपना पूरा भएन । अहिले स्थानीयले बोरिङ किन बनेर भनेर खोजी गरेपछि कर्मचारीले अघिल्लो वर्षको खाता पल्टाएर गाएब भएको ३ लाख २८ हजारको हिसाब किताब खोज्न थालेका छन् ।
नगरपालिकाको योजना कार्यान्वयनको लागि गत वर्ष असारमा बेल्कोट सुन्दरनगरमा बोरिङ निर्माणका लागि स्थानीय वीरबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उपभोक्ता समिति गठन भयो । नगरपालिकाले समितिलाई असारमै पहिलो किस्ताको रकम स्थानीय कञ्चन विकास बैंकमा राखिदियो । साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भयो तर असारमा पेश्कीको लागि भनेर भुक्तानी गरेको रकम उपभोक्ता समितिले पुसमा निकाल्यो ।
“हामीलाई नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष असारमा पेश्की दिएको थियो, त्यो रकमलाई पुसमा निकालेका हौं तर काम हुन सकेन” उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कार्कीले भने ।
स्थानीयले भने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र नगरपालिका एक कर्मचारीले पेश्की निकालेर आफ्नो व्याक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरेको दाबी गरेका छन् । “अध्यक्षले बोरिङ निमार्ण नगरेर पेश्कीमा आएको पैसाले आफ्नो घरमा लगाए । यसमा नगरपालिकाका कर्मचारी दिपेश शाहीको पनि हात छ । हामीसँग यसको प्रमाण छ” एक स्थानीयले अनलाइन डबलीसँग भने ।
यता उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कार्की भने यो स्वीकार्न तयार छैनन् । उनले भने, “नगरपालिकाको पेश्कीको पैसाले बोरिङ गाड्ने मेसिनको खर्च पुगेन, सँगै कोरोना सुरु भएकाले हामीले बजेट कार्यान्यन गर्न सकेनौं । पैसा अपचलन भएको छैन ।” तर अध्यक्ष कार्कीको यो कुरा पत्याईहाल्न सकिने अवस्था छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को अन्तिम महिना असारमै सकि सक्नु पर्ने योजनाको पेश्की रकम अर्को आर्थिक वर्षको पुसमा निकाल्नुले यहाँ अनियमितताको सोझैं आशंका गर्न सकिने ठाउँ छ । त्यसमाथि पुसमा बैकबाट निकालेको रकम उपभोक्ता समितीले ६ महिनापछि स्थानीयले आवज उठाएपनि हतारमा बैंकमा जम्मा गरेको देखिन्छ ।
“हामीले पुसमा निकालेको ३ लाख २८ हजार पैसा काम सुरु हुन नसकेपछि जेठमा लगेर पुनः बैकमा जम्मा गरिदिएका छौ” अध्यक्ष कार्कीले भने । उसो भए बजेटको सरकारी पैशा ६ महिनासम्म आफ्नो घरमा लगेर किन राख्नु भयो त ? भन्ने प्रश्नमा उनले उत्तर दिन सेकनन् ।
नगरपालिकाले योजना र पैसा दुबै बिर्सियो । बजेट फ्रिज भएको २ आर्थिक वर्ष पछि पनि उपभोक्ता समितिलाई दिइएको पेस्की रकमबारे नगरपालिकालाई अत्तोपतो छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आसरमा सिँचाई बोरिङका लागि विनियोजन गरेको १० लाखको बजेट कार्यान्वयन नभै सोही आर्थिक वर्षमा फ्रिज भएपनि पेस्कीमार्फत दिइएको ३ लाख रुपैयाँ उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले व्यक्तिगत रुपमा चलाएको स्थानीयको आरोप छ ।
अर्को आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि बोरिङ निमार्णको कम सुरु नभएपछि स्थानीयले चाँसो देखाउन थालेका हुन् । स्थानीयले उपभोक्ता समितिको बैठक बोलाउन पटकपटक आग्रह गर्दापनि अध्यक्षले नमानेपछि उनिहरु नगरपालिका पुगे । नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीलाई नै पत्र लेखेर अनुगमन गरिदिन अग्रह गरेपनि कुनै प्रतिउत्तर नपाएको स्थानीयको गुनासो छ ।
“हामीले जेठ १९ गने नगरपालिकालाई पत्र लेखेर अनुगम गरिदिन आग्रह गरेपनि हाम्रो आग्रहको उपेक्षा भयो । त्यसपछि हामी तपाईँहरु समक्ष आयौं” एक स्थानीयले अनलाइन डबलीसँग भने ।
यस विषयमा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत खगेन्द्रबहादुर सिंहले उक्त घटनाप्रति अफुहरुको ध्यानकर्षण भएको र आफुले कर्मचरीहरुलाई उक्त योजनाको फाइल खोज्न लगाएको बताए । तर, बजेट कार्यान्वयमा देखिएको बेथिति र मनपरिको जिम्मा भने उनले लिन चहेनन् । कर्मचारीहरुलाई दोष दिँदै उनि उम्कन चाए । “बजेट उक्त ठाउँमा गएको र निर्माण सुरु नभै पैसा रोकिएको भन्ने पनि मलाई ज्ञान भएन” सिंहले भने । योजनाहरुको फलोअप गर्ने संयन्त्र भएपनि कर्मचारीहरुले आफुलाई जानकारी नदिएको उनको तर्क छ । बजेट फ्रिज भइसकेकाले पेस्की रकम जरिवानासहित नगरपालिकालई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए ।
उमपेयरको लजमर्दो तर्क संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले नगरभित्रका सम्पूर्ण योजनाहरुको नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मा उपमेयर र नेतृत्वको टिमलाई हुने भनेको छ । तर, घोडाघोडी नगरपालिकाका उपमेयर प्रेम कुमारी थापाले भने आफुलाई अलपत्र परेको योजनाबारे थाहा नै नभएको बताइन् ।
“त्यहाँको भाईहरु एकदिन आउनु भयएको थियो, बुझ्छु भनेको थिए समय नै पाइन की के भयो खै ?” थापाले अनलाइन डबलीसँग भनिन् । अनुगमन गर्ने काम तपाईँको होइन र भन्ने प्रश्नमा उपमेयर थापाले देशभर यस्तै हो भनेर हास्यास्पद तर्क गरिन् । “त्यो त हो तर देशभर यस्तै छ, अब यस्तै हो” उनले भनिन् ।
विकासको पैसा अध्यक्षको घरमा बजेट फ्रिज । उपमेयरको लाजमर्दो तर्क
घोडाघोडीमा व्यथीतिको नया नमूना । विकासको पैसा अध्यक्षको घरमा बजेट फ्रिज । उपमेयरको लाजमर्दो तर्क
Dabali Media Pvt.Ltd. यांनी वर पोस्ट केले शनिवार, १३ जून, २०२०